Stephen Lot's 'Salem's Lot' dia hampihorohoro amin'ny teatra amin'ny 2022 - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny horonan-tsarin'i Stephen King's 'Salem's Lot' dia hampihorohoro amin'ny teatra amin'ny 2022
Ny horonan-tsarin'i Stephen King's 'Salem's Lot' dia hampihorohoro amin'ny teatra amin'ny 2022
Ny teatra Vampire Invade amin'ny 2022
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021 3,525 hevitra
Ny Gary Dauberman dia nitantana sy nanoratra Salem's Lot tsy lavitra ny fampifanarahana. Ny tantaran'i Stephen King, tanàna iray tratran'ny vampira, dia nalaza avy tamin'ny mpanoratra. Io no fampifanarahana lehibe natao ho an'ny miniseries amin'ny fahitalavitra. Noho izany, ity fanavaozana ity dia iray tena ankasitrahana. Soa ihany raha ny filazan'ny New Line Cinema fa tsy hiandry ela intsony isika vao hiditra amin'ny sinema io. Tokony ho herintaona manomboka izao, septambra 2022.
Ranomaso no ivon'ny Salem's Lot. Izy no miverina amin'ny tanindrazany mba hahita tanàna tena hafa tokoa. Ny olona rehetra dia navadika ho vampira iray tamin'ny zava-boary taloha, izay rembin'ny mponina tao an-tanàna rehefa natory izy ireo.
Ny tantaran'i Stephen King an'ny vampira dia mandim-potoana rehetra, saingy iray izay tsy nojerena tamin'ny sarimihetsika izay ananantsika ankehitriny. Taorian'izay, miniseri fahitalavitra ilay sarimihetsika ananantsika ankehitriny. Betsaka ny sombin-kazo lehibe kokoa tsy maintsy tapahina mazava ho azy. Raha ny marina, betsaka ny boky no tsy eo.
Gary Dauberman dia mitarika ny famerenana ary tena faly izy amin'ny famitana ilay sarimihetsika ary hahatonga azy io ho marina amin'ny fiainana araka izay azo atao ilay boky.
Faly ve ianao amin'ny famerenana indray an'i Stephen King's Salem's Lot? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.